Umbono weFaboulose kwichibi le-Auronzo - I-Airbnb
Umbono weFaboulose kwichibi le-Auronzo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFederica
Ndiyathanda ukucinga ukuba andirenti iflethi kuphela, kodwa ndikunika enye into, ukwenza ukuba usazi isixeko ngakumbi kwaye uchithe iholide emnandi apho.
Ukuphumla kunye neflethi ekhululekile, ukuhamba kwemizuzu emibini ukusuka kumbindi welali encinci, ukusuka kwivenkile enkulu, icawa kunye nendawo yokuhlamba impahla.
Kude nesitrato esikhulu, ikwindawo ezolileyo neluhlaza
Uhambo lwemizuzu esi-8 ukuya echibini laseSant Caterina, likwindawo entle ukusuka apho unokuba nembono entle echibini, kwintaba yeAgudo kunye neTre Cime di Lavaredo, enye yezona ndawo zintle zaseDolomiti.
kwimizuzu eyi-15 uya kuba sembindini weAuronzo kwaye ukuba awukuthandi ukuhamba, ungasoloko ubamba ibhasi eya kukuzisa kwelinye icala leAuronzo.
I-2km ukusuka kwiflethi kukho indawo yesibhakabhaka, ungarenta yonke into oyifunayo kwisibhakabhaka apho. Ngexesha lasentwasahlobo le ndawo idume ngeBub yolonwabo kunye nePaki yeAdventure
yiflethi engama-43 sm, kumgangatho wesibini one:
- igumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini kunye newodrophu enkulu
- igumbi elinye kunye nebhedi yebhedi
- igumbi lokuhlambela elinye elineshawa kunye nomatshini wokuhlamba
- igumbi lokuhlala kunye nekhitshi kunye nebhedi ye-sofa yabantu aba-2
-I-balcony enkulu ejikeleze iflethi
- yokupaka ngaphandle
- igadi yabucala, ekhoyo kuzo zonke iiflethi
* iimbiza, izitya, umatshini wekofu waseNtaliyane
* eletrich hoven, umatshini wokuhlamba
* umosi wenwele
* Iingubo zasebusika, iqhiya elula yehlobo lasentwasahlobo
* iyafumaneka ibhedi encinci yomntwana osahambayo
* Isitulo elwandle kwibalcony
* Iishiti zebhedi
* Ilaphu letafile
* Iitawuli zasekhitshini
YINTONI ebandakanyiweyo kwiXabiso
zonke iindleko zibandakanyiwe: umbane, amanzi, igesi, ukubetha
Ukucoca ekupheleni kokuhlala kwakho kuya kwenziwa kuthi ukuhlawula i-euro ye-50
I-Auronzo yidolophu yabantu abayi-4.000 kwaye iqulunqwe ziidolophana ezincinci kuzo zonke i-Saint Caterina lake: Cima Gogna, Cella, Villapiccola, Riziò, Reane, Pause, Ligonto, Giralba, S.Marco kunye neMisurina
Ichibi ladalwa malunga ne-30 kunye nokwakhiwa kwedama elikhulu; ngexesha lasehlotyeni i-Auronzo lunxweme oluhle apho ukhuphiswano lwamazwe ngamazwe lweenqanawa ezikhawulezayo ludlalwa rhoqo ngo-Agasti
Ungalibali ukutyelela icawa yaseSaing Giustina eVillagrande, eyakhiwa ngo-1700 kunye neSain Lucano enye eVillapiccola.
Kukho isityalo sezinto onokuthi uzenze ngexesha leNtwasahlobo / iHlobo kunye ne-Autumn / Winter, ufuna nje umzamo wokulandela okwenzekayo.
Qhagamshelana nam kwaye ndiya kubonelela ngoluhlu lwemisebenzi kunye nokuba kuqhubeka ntoni
4.73 · Izimvo eziyi-34
Adoro muovermi, confrontarmi con altre culture, vedere posti nuovi...
"...Il viaggio non è l'emozione di attimi pericolosi
da gente che non ti somiglia..."
....mi emoziono al solo sentir parlare una lingua diversa dalla mia, mi fa gia' viaggiare con il pensier…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Auronzo